Soo-saarista Nidaamka Shixnadda Gawaarida Shiinaha iyo Warshad | Huade
Nidaamka raritaanka baaburku waa nidaam kaydin cufnaan badan oo u adeegsada gawaarida si otomaatig ah loogu qaado sariirta lagu raro tareennada tareenka ku jira. Qalabka raadiyaha waxaa meel fog ka maamula hawl wade. Waxaa jira adeegsi habboon oo ah booska kaydinta, iyo nabadgelyada goobta shaqada sifiican ayaa loo ilaaliyaa maxaa yeelay forklift uma baahna in lagu kaxeeyo sagxadaha ama marinnada udhaxeeya rakibaadaha, sidaa darteed, kharashka dayactirka waa la dhimay iyada oo loo daneynayo waxyeelo yar oo ka timaadda raajooyinka.
Nidaamka wax lagu raaco ayaa ka shaqeyn kara midkii ugu horreeyay, kii ugu horreeyay (FIFO) ama kii ugu dambeeyay, kii ugu horreeyay ee (LIFO), tiro aad u tiro badan oo ah alaabooyin isku mid ah sida cabitaanka, hilibka, cuntada badda, iwm. Waa xalka ugu fiican ee qabowga keydinta leh heerkulka illaa -30 ° C, maxaa yeelay ka faa'iideysiga booska ayaa muhiim u ah maalgelinta keydinta qabow.
Waxa kale oo suurtagal ah in lagu xakameeyo tirakoobka iyada oo loo marayo nidaam dareemayaal ah oo tirinaya santuuqyada la keydiyay, farqiga u dhexeeya baallooyinka ayaa ah mid la isku hagaajin karo oo loogu talagalay isku dhejinta booska keydinta ama hawo qaboojinta si ka wanaagsan.
Nidaamka gawaarida gawaarida wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka soo socda:
1.Kharashka wax ku oolka ah iyo waqti luminta; forklifts looma baahna inay soo galaan aagga lagu duulayo, gawaarida gawaarida ayaa si joogto ah u shaqeyn kara halka hawlwadeenku uu gacanta ku hayo santuuqa leh forklift
Heerarka hooseeya ee halista ama waxyeelada gaadhiga iyo shaqaalaha ka hawlgala
3.Ka isticmaalka ugu hooseeya dabaqa, dariiqa forklift ee meelaha wax lagu xusho waa la tirtiray, ka faa'iideysiga boosku wuxuu kordhay ku dhowaad 100%.
4.Waxaa si otomaatig ah u qaadaa soo uruurinta santuuqa iyo dib ula soo noqoshada iyada oo si sax ah loo sita
5. Heerkulka hawlgalka 0 ° C illaa + 45 ° C / -1 ° C illaa -30 ° C
6.Waxaa lagu heli karaa qaab-dhismeedka qaabeynta sariirta kala duwan ee FIFO / LIFO, dabcan waxay u baahan tahay qorsheynta qaabeynta qashinka
7. Qaabeynta sariirtaada waxay u aadi kartaa 40m qoto dheer haadka
8.Up ilaa 1500 kg / sariirtaada ayaa lagu maamuli karaa nidaamka
9.Scalable solution taas oo macnaheedu yahay xamuul badan ayaa la gelin karaa nidaamka si loo kordhiyo waxtarka
10.Waxaa lagu dhisay astaamaha badbaadada sida jiheeyaha hagaha sariirta, joojiyayaasha dhamaadka tareenka, dareemayaal sawir qaade, iwm.
Hore: Nidaamka Rakibidda Qalabka Korantada
Xiga: Nidaamka Bakhaarka sariirtaada